Kedu ka m si nwee mmasị na Social Media? | Martech Zone
Mgbe Shel jụrụ maka ndị nwere ike ịmasị ịnye ụfọdụ nzaghachi na SAP Nyocha na Social Media, Amalitere m iru ma degharịa ya ozugbo. Site na ikike Shel, o kwere ka m tinye nzaghachi m na blọọgụ m. Nke a bụ Nkebi nke M!
Gwa m mgbe na otu mbụ i siri nwee mmasị na soshal midia. N'ihi gịnị?
Arụ ọrụ na Mbipụta Mgbasa ozi ruo ihe karịrị afọ iri, elere m anya ka beganntanetị malitere ịmịpụ ngwa ngwa yana, yana ya, mgbasa ozi sitere na ụlọ ọrụ akwụkwọ akụkọ. Enwere ike ịnweta Intaneti, dị ọnụ ala, na teknụzụ dị mfe. Ọbụna n'ime mgbasa ozi ebipụta, ekwenyere m mgbe niile na onye ọ bụla na-ajụ ihe nwere ike na adịghị ike nke ya. Mgbe ụfọdụ akwụkwọ akụkọ ọ bụghị ebe kachasị mma iji kpọsaa.
Mgbe Intanet bịara, ndị ọrụ ibe m hụrụ ya dị ka ihe iyi egwu. Ahụrụ m ya dịka ohere dị ịtụnanya. Mfuru n'ụgbọ mmiri kwaga Denver, Colorado iji rụọ ọrụ maka ụlọ ọrụ na-eduzi njikwa ịntanetị. O di nwute, esonyeere m mgbe afụ ahụ na-agbawa. M kwagara Indianapolis iji sonye na akwụkwọ akụkọ mpaghara ma na-eduzi mgbalị ha na-ere ahịa, na-eji data eme ihe iji mee ka ndị debanyere aha na-aga n'ihu na ịmanye usoro mmemme maka ndị ahịa.
Agbalịrị m ike kwere m iji nweta teknụzụ dị ka Email Marketing n'ime akwụkwọ akụkọ ahụ, mana ihe ọ bụla "ịntanetị" ka a hụrụ dị ka usoro iji nyefee ọdịnaya ma ree mgbasa ozi… anaghị eke mmekọrịta. Ntanetị ọ bụla dịkwa n'okpuru ikike nke ngalaba IT ka m na-abanye na mkpịsị ụkwụ ndị ọzọ. Mgbe ọhụụ ọhụrụ batara wee malite ịjụ, “Gịnị ka ị na-eme?”, Amaara m na ha amaghị nke ọma na ọ dị m mkpa ịpụ.
Site na enyi na otu onye ọrụ, Darrin Gray, ezutere m Pat Coyle ma sonye na ụlọ ọrụ ha, Nkenke. Darrin bu onye isi ahia na nzukota. Pat bụ na ọ bụ ọkà n'ịzụlite mmekọrịta. Abụ m onye data na teknụzụ - na - achọ teknụzụ kachasị mma iji nwekwuo mmekọrịta nke ụlọ ọrụ na atụmanya ha na ndị ahịa ha. Ọ bụ ihe ịga nke ọma, Darrin rere, Pat duzie, m wee wue!
Ọ bụ n'oge a ka mụ na Pat malitere ịhụ mmetụta Social Media na-enwe. Ọ bụghị ihe ọchị, anyị gụrụ akwụkwọ Shel, (rie) Mkparịta ụka gba ọtọ. Anyị ghọtara na ahịa abụghịzi nanị teknụzụ 'push', ọ na-agbanwe n'ime ihe dị nnọọ iche.
Pat kwagara Indianapolis Colts oge niile. Ndị Colts, nke Jim Irsay duziri, maara na ha dị nso na ịdị ukwuu ma ekwenyere m na ọ nwere ọhụụ ịmara na ọ dị ya mkpa iji ohere ahụ jikọọ ya na ndị Fans mgbe ọ na-aga Superbowl.
M kwagara Kpọmkwem Ngwaọrụ, Onye na-enye ọrụ Email, nke e mere ka ọ dị mma site na nkwusa ozioma nke CMO na onye guzobere ya Chris Baggott. Ozi Chris banyere uru dị egwu nke ire ahịa email dabere na ikike, na-ezubere ozi ziri ezi nye ndị ziri ezi n'oge kwesịrị ekwesị.
N’afọ abụọ gara aga, mụ na Pat ka bụ ezigbo ndị enyi ma na-ezukọkarị otu ụlọ ọgbakọ akwụkwọ ọ na-ahazi, Indianapolis Book Mashup. Akwukwo mbu anyi? Mkparịta ụka gba ọtọ n'ezie!
Pat ji ohere ịkwanye Colts ka ọ wulite netwọkụ mmekọrịta maka Superbowl Champions. Enwere m mmiri ka m na-ele MyColts.net ka ọ bụrụ eziokwu. Site na usoro nke m, na-ebupụta Community Mmepụta maka ExactTarget ma na-akwalite Onye njikwa ngwaahịa maka ExactTarget ebe anyị toro site na narị otu narị ndị ahịa jikọrọ ọnụ ruo ọtụtụ puku, enwere m ike ile anya ka ewepụtara MyColts.net.
Mụ na Chris Baggott bidokwara zukọ ma na-ekwu maka onye na-ajụ ndị mmụọ ase. Chris ghọtara uru onye na-ajụ ase, nke (ekwenyere m) nwere nnukwu mmetụta na ịkọwapụta ExactTarget na ihu nke ụlọ ọrụ ahụ. Chris ' Email kacha mma omume blog enwetara otutu oge n’ime otutu afo ma gha amata ya dika onye ndu echiche n’ulo ahia ahia Email - n’enwe obi uto na blog ya. Nke a bụ mgbe Chris malitere ịhụ ohere, n'agbanyeghị. Blọọgụ bụ ụgbọ ala mara mma maka ozi - mana ọ naghị adịrị ndị ahịa mfe ịchọta ọla edo nke ndị na-ede blọgụ na-eziga.
Chris bidoro ịgha mkpụrụ maka Compendium sọftụwia, mmalite ohuru ya. Lelee ụlọ ọrụ a anya! Ọ bụ evolushọn ọzọ nke ịde blọgụ ma ọ na-aghọ eziokwu ugbu a. Oge ụfọdụ ọ na adị m ka nna m na-ahụ ka nwa ya tolitere ka m na-ahụ ka ụlọ ọrụ a bidoro - mana, ọ dị nwute, oge anaghị anọ m ka m sonyere ndị otu a.
Gini mere m ji nweta onwe m na Social Media?
Mgbasa mgbasa ozi ọha na eze na-egwu egwuregwu. Ekwenyere m na ọ dị mkpa maka azụmahịa dịka ọ dị maka ọchịchị onye kwuo uche ya. Social media na-enye onye ọ bụla keyboard na ịntanetị nwere olu. Mgbasa mgbasa ozi na-enye ụzọ maka ezigbo, azụmaahịa na-akwụwa aka ọtọ iji wulite mmekọrịta na atụmanya ha na ndị ahịa ha. Ọ bụghịzị na ọ bụ 'onye nwere ike ị nweta mgbasa ozi kachasị' onye meriri. Businesseslọ ọrụ agaghịzị akwụ ụgwọ nnukwu pasent nke mmefu ego ha iji bipụta na mgbasa ozi mgbasa ozi ka achọta. Ugbu a ha ga-arụ nnukwu ọrụ ma okwu a ga-apụ.
Onye na-ere ahịa na-achọghị itinye aka na nke ahụ?
Nkọwa Akụkụ: Ọtụtụ afọ ka e mesịrị, Indianapolis Star amalitela ịhụ ọkụ ahụ. Ozugbo ndị ọrụ nchịkọta akụkọ kwara gị emo, ugbu a ọdịnaya ndị ọrụ na-eme na-abụ mpaghara na-ebute ụzọ maka akwụkwọ akụkọ ahụ. Lelee Ndi IndomMm dị ka nnukwu ihe atụ.
Tags: douglas karrkpachaara anyaIndianapolis nwamkparịta ụka gba ọtọChebe Israelelekọta mmadụ media
Aug 18, 2007 na 9:27 PM
Akwa isiokwu, Doug. Esi m na ebipụta ụwa kwa. Egburu m ezé m na-amụta ụdị ihe atụ na CompuWriter Jr. Ihe ahụ nwere ogologo ihe nkiri vidio nwere mkpụrụedemede ederede nke na-agbanye na wiilị n'ime igwe. Ozugbo e pịnyere leta, ị nweghị ike ịlaghachi ma mezie ya. Kwesịrị idegharị akara ahụ ma gbanye ya na mmejọ ahụ!
Ọ na-afụ m mmụọ ka teknụzụ bịara nke mere ka usoro ọrụ niile bụrụ “anwansi.” Site na kọmpụta na onye nbipute, ụwa meghere maka ohere na-adịghị agwụ agwụ, gụnyere ịgbazi ụdị-o tupu ịdepụta peeji ahụ (were ya).
Mgbe ahụ, Intanet na ndị mmadụ malitere ikwurịta okwu na ibe ha dịka ọ dịtụbeghị mbụ. Ọdịiche na ịdị omimi nke ọgụgụ isi na ụwa na-atụ m mgbe niile. O doro anya na enwerekwa mgbawa, mana m na-agbachitere ikike ha ịbanye na mkparịta ụka ahụ. Ọ bụ ihe na-atọ ụtọ ibi n’oge ezi mgbanwe.
Aug 18, 2007 na 9:51 PM
Dị jụụ! Amutaghi m na ibuputakwara gi! M nwere eletriki / elektrọnik ndabere na-arụ ọrụ na pagination n'akụkụ nke azụmahịa nnọọ a bit otú ahụ ka m maara ebe ị na-abịa. Anọ m ebe ahụ mgbe anyị malitere pagination na akpaaka site na ịkpụ na mado peeji na-ewuli!
Gị bụ ụlọ ọrụ na-adọrọ adọrọ yana nke ahụ maka teknụzụ. Echere m na niche mkpọsa bụ ọdịnihu nke mkpọsa na, ọ bụ ezie na ike taa, Echeghị m na "Super Echekwala" ga-adịru ọzọ afọ iri (ọbụlagodi m na-atụ anya bụghị).
Youzọ unu si na-enyere teknụzụ aka Nnụnụ Anụ Unlimited dị egwu. Gị franchisees bụ kechioma folks nwere gị!
Nnọọ ihe na-akpali mmasị na mgbasa ozi mmekọrịta !. M sitere na Sun Microsystem na onye isi m na-akwalite echiche a nke mgbasa ozi. Edere m banyere Chris Anderson's Long Tail na
Mgbe m na-eme nzukọ ọmụmụ ihe Bloglọ ọrụ ịde blọgụ na rationslọ ọrụ 'na-eme ya n'ụzọ ziri ezi', ụlọ ọrụ mbụ m kwuru bụ Sun na Jonathon Schwartz!
Agụla m blog gị n'oge gara aga! Na-arụ ọmarịcha ọrụ ma nwee echiche na-atọ ụtọ banyere otu teknụzụ na-agbanwe ma na-agbanwe ndụ anyị.
Aug 19, 2007 na 10:42 PM
Ornye ma ọ bụ gịnị bụ Shel?
Shel bụ Shel Israel, onye edemede nke Mkparịta ụka gba ọtọ - akwụkwọ m na-akwado. Shel nwere oke blog nke na-aga n'ihu inyocha ma kwurịta Social Media.
Ma ọ bụ nwoke mara ezigbo mma! Ọ bụ n'ụzọ doro anya, mepere emepe, ime ihe n'eziokwu ma dị site na saịtị ya. Echere m na ọ bụ otu n'ime ndị edemede mbụ mere ka ọrụ ya rụọ ọrụ site na iji blogosphere!
Dec 28, 2007 na 9:34 PM
Social media saịtị bụ ọhụrụ na-abịa ụzọ nke mgbasa ozi, m kwere. Ọ bụ ihe ịtụnanya nye m etu thentanetị si malite kemgbe ọtụtụ afọ, naanị m na-eche ihe ga-eme n’ọdịnihu. Onye oru ntanetị ọ bụla nke na-ejighi saịtị mgbasa ozi mmekọrịta na-efu nnukwu ohere maka azụmahịa bara ụba.
Meredith na Colorado
Jul 2, 2015 na 11: 51 AM
Yabụ ị na-ekwu na mmekọrịta ndị ahịa bụ isi ihe kpatara mmekọrịta mmadụ na ibe ya ji dị oke mkpa? Ì chere na blọọgụ nwere otu ohere ahụ ka ọ bụ na ha debere onye dere ya na ụgbọ elu dị elu karịa ndị na-ege ntị?
Jul 2, 2015 na 2:42 PM
Ikike inye uru ma wuo ikike na blọgụ… wee kesaa ya ma kwalite ya site na mgbasa ozi mmekọrịta bụ nnukwu njikọta. Usoro mgbasa ozi na-elekọta mmadụ abụọ dị iche iche, na-enyere gị aka ịkparịta ụka na ndị na-ege ntị ma ọ bụ na-enyere gị aka iwulite obodo gị. Amaghị m na ọ ga-adị ike na-enweghị nke ọzọ.